Inside-the-box Thinking – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 13 October 2011 Categories Discussion, Reproduction, Thoughts
3 thoughts on “Inside-the-box Thinking”
တကယ်တော့ အဲဒီကောင်မလေး ကို ကျေးဇူးတင်၇မှာပါ… အကြောင်း ကောင်မလေး၇ဲ့ မေးခွန်းတွေက စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား တွေ ၇ဲ့ စကားကို ကိုယ်စားပြုလို့ပါ… လီကွမ်ယုဖြေသွားတာ လဲ အ၇မ်းကောင်းပါတယ်… စင်္ကာပူဟာ…၇ုပ်ဝါဒအ၇မ်း ဆန်တဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံပါ …. လူမျိုးေ၇း ခွဲခြားခြင်း… အနောက်တိုင်းသား တွေ ကို အထင်ကြီးလွန်းကြီးခြင်း… အေ၇ှ့တိုင်းသားတွေ ကို အထင်သေးလွန်းခြင်း … တ၇ုတ်လူမျိုးခြင်းတူ၇င်တောင်… ပြည်ကြီး တ၇ုတ်…တွေ ကို နှိမ်ခြခြင်း တွေ…. နောက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ….. အပြင်စကားပြော ချို သလောက်…နောက်မှာ … အတင်းပြောခြင်း………. သည်းခံစိတ်နည်းပါးခြင်း …… တွေ နဲ့ နေသားကျနေကြတဲ့..နိုင်ငံသားတွေ ပါ …နောက်တစ်ခု က … ၇ုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်း တွေ နောက်လိုက်နေ၇လို့ … သားသမီး တွေ အပေါ်မှာ လုံလောက်တဲ့ အချိန်နဲ့ မေတ္တာတ၇ားမပေးနိုင်… အိုမင်းမစွမ်း မိဘတွေ ကို အချိန်မပေးနိုင် လို့ လူအို၇ုံလို နေ၇ာတွေ ပို့ နဲ့ .. ဒီလို မိသားစုလေး တစ်စု အပေါ်မှာ တောင် လုံလောက်တဲ့ အချစ် ခင်တွယ်မှုမပေးနိုင်ကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေ ဟာ… သူတို့၇ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေ၇း တွေ ကို အမြဲလိုလို တောင်းဆိုနေတတ်တာ ကလွဲလို့ သူတို့ ၇ဲ့ မိခင်နိုင်ငံဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ၊ လူမှုရေးအရ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု မ၇ှိတော့တာ ဟာ …. အထူးအဆန်း တစ်ခု မဟုတ်ပါဖူးလေ…….
1 November 2011 at 6:37 pm
နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလက်သင့်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတော့ရှိပုံရပါတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် နေရာတကာနိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်နေလို့ အနေကျပ်လာပုံရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား အချိုးကမြန်မာပြည်နဲ့ စာရင် အများကြီးနဲပါသေးတယ်။ ဒါတောင် အစိုးရပိုင်းကရော ပြည်သူပိုင်းကပါ လက်ခံနိုင်ပုံမရသေးပါ။
Facebook က ဒါကို မျှဝေထားတဲ့ ပို့(စ်)မှာ စင်္ကာပူမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်က comment လာရေးသွားပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် ပြန်ဖြေထားတာလေးက ပညာသင်နေသူ လူငယ်များအတွက် အသုံးတည့်ချင်တည့်နိုင်တာမို့ အဲဒီ့ ကွန်မန့်နှစ်ခုကို ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Evelynn: ပြန်မမေးတတ်တာ ပြသနာတစ်ခုတာင်ဖြစ်လို့။ ကျောင်းမှာဆို သူများတွေက မေးလိုက်တာ ဖွတ်ဖွတ်ကျေလို့။ သမီးတို့တွေကတော့ မမေးကလည်း မမေးတတ်တော့ သိချင်တတ်ချင်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ။ စာမတော်တဲ့သူတွေလို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ အမှတ်စာရင်းကလည်း ငယ်ငယ်ကလို ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးပြီးကပ်တာ မဟုတ်တော့ ။
Atta Kyaw: အဲဒါ လေ့ကျင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျောင်းစာ (ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်) ဖတ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးက အခန်းလိုက် ခေါင်းစဉ်တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ်ဖတ်မယ့် အခန်းခေါင်းစဉ်ကို မြင်တဲ့အခါ ဆက်မဖတ်သေးဘဲ သည်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ဘာတွေ သိချင်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို စာရွက်တစ်ရွက် / မှတ်စုစာအုပ်မှာ ချရေးထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အားလုံး မဖတ်သေးဘဲ ခေါင်းစဉ်ခွဲ၊ ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေကို ဆက်ဖတ်ရင်း အလားတူပဲ အဲဒီ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်မှာရော ကိုယ်သိချင်တာများအတွက် မေးခွန်းများ ချရေးထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ စာတွေကို ဖတ်သွားပါ။ ခေါင်းစဉ်ငယ် တစ်ခုစာ ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ မဖတ်ခင်က ကိုယ်သိချင်လို့ ထုတ်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေနိုင်လားဆိုတာ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ခန်းလုံး ပြီးသွားတဲ့အခါလည်း စစချင်းတုန်းက ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေကို ဖြေကြည့်လို့ ရနေလောက်ပါပြီ။ ဒါဆို စာကျက်ရတာ ပိုလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိ၊ ပိုလည်း မှတ်မိတဲ့ အပြင် “မေးခွန်းထုတ်တဲ့ အလေ့အထ”ကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး လေ့ကျင့်သွားရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ် သမီးတို့ရေ။
5 hours ago · LikeUnlike · 10 people
Previous Previous post: Talks in Toungoo on7May 2011
Next Next post: Women’s Talk